दक्षिण कोरिया र को’रोनालाई हेर्दा ! – Khabarhouse
दक्षिण कोरिया र को’रोनालाई हेर्दा !
Khabar house | ४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०२:२५ | Comments
आस्था विन्दु मल्ल: मैले जीवनका उर्जाशील समय अध्ययणको शिलशिलामा दक्षिण कोरियामा बिताए। लामो समय सम्म त्यही बस्दा मेरो कर्मथलो पनि त्यहि स्थापित भयो। त्यहाँ बस्दा धेरै कुराहरु सिक्नुको अलवा नेपाली समुदाय संग प्रत्यक्ष जोडिदै सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पनि स्थापित हुने मौका मिल्यो ।
संसारहरु घुम्दै जादा जन्मभूमी नेपाल पछिको माया कोरिया कै लाग्छ जहाँ मेरो पसिना र मेहनतको धेरै लगानी छ । कोरियन संस्कृति, कोरियन मेहनत, समयको महत्व आदि कुराहरुमा अ’भ्यस्त हुदा कोरियालाइ भुल्न नसक्ने भएको छु । मेरो कर्म थलो दक्षिण कोरिया हो, कोरोना भाइरस कोरियामा प्रवेश नहुदै म नेपाल आएको थिए । म सुरक्षित छु, कोरियाले अपनाएका बिभिन्न बिधिहरु नेपालमा पनि अपनाउन अत्यन्तै आवश्यक छ भन्ने महशुस भैरहेको छ ।
अहिले सबै फुर्सदमा घरमै छौ, यही बेला धेरैको मलाइ प्रश्न आँउछ दक्षिण कोरियाले संक्रमण अगाडी बढन कसरी दिएन ? कोरियामा २० जनवरी देखि फेब्रअरी २० सम्म को;रोना भाइरसको संक्रमण ३४६ जनामा देखिएको थियो। यो आँकडाले कोरियामा व्यापक म’हामारीको रुप लिन सक्ने आशंका गरिएको थियो । तर यसलाई दक्षिण कोरियाले जहाँ छ त्यहाँ बाट अगाडी बढन दिएन ।
तत्काल नयाँ कदम चालियो, ठाँउको ठाँउ संक्रमितसँग सम्पर्क भएका मानिसलाई ट्रेसिङ गर्न थालियो र नागरिकले पनि राज्यलाई इमान्दारी पुर्वक ठूलो सहयोग गरे । अनि थप संक्रमणको बाटो क्रमिक बन्द भयो। हेर्दा सामान्य नै छ तर यसको लागि राज्यले लिने रणनीति र नागरिकले राज्यलाई गर्ने सहयोगमा भरपर्दो रहेछ ।
दक्षिण कोरियाले जुनसुकै कामको सुरुवात गर्दा होस या संकट पर्दा होस पाल्ली–पाल्ली’ (छिटो–छिटो ) कदम चाल्नु कोरियाको प्रचलन नै हो । यहाँ सबै कुरा छिटो गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित भएको छ । कोरोना भाईरस नियन्त्रणको गति पनि छिटो–छिटो अगाडि कदम चालिएको हो । दक्षिण कोरियामा पहिलो संक्रमण देखिए लगत्तै कोरोना भाइरसको परीक्षण र आवश्यक किट्स उत्पादनसँगै आपूर्तिमा जोड दिइयो ।
धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरियो ,जसलाई संक्रमण देखिन्छ उनीहरुलाई कडा निग्रानीमा राखियो । अहिले कोरियाका स्वाथ्य कर्मीहरुले देखाएको त्याग,सेवा भाव र उच्च आत्मबल संसारको लागि महत्वपूर्ण पाठ बन्न पुगेको छ । त्यहाँको जनजीवन खासै प्रभावित बनेको छैन । अझ विस्तारै पहिलाकै अवस्थामा केन्द्रित हुदै छ । स्कुल, शैक्षिक संस्थाहरुको बिदा अविध थप गरि अनलाइन बाट पढाइ सुचारु गरिएको छ ।
अझ अर्को रोचक कुरा यस्तो अवस्थामा समेत बुधबार अर्थात आज दक्षिण कोरियामा संसद्को राष्ट्रिय एसेम्ब्लीको मतदान समेत सम्पन्न भयो । जहाँ ६६ प्रतिशत मतदान भयो भने क्वारेन्टीनमा राखिएका चार सय भन्दा बढि को;रोना संक्रमितहरुले समेत मतदान गरे । दक्षिण कोरियाले राज्यका संयन्त्रहरुको परिचालन लाई प्रभाबकारी रुपमा परिचालन गरेको र नागरिकको राम्रो साथ पाएकाले गर्दा को;रोना भाइरस नियन्त्रणमा विश्वका अरु देश भन्दा आफुलाई अब्बल सावित गर्न सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
कोरियामा रहेका झन्डै ४५ हजार हाराहारी नेपालीहरु मध्ये अहिलेसम्म कसैलाई पनि कोरोनाको संक्रमण भएको छैन । दक्षिण कोरियाले अन्य देशमा जस्तो जनजीवन प्रभावित हुने गरि लकडाउन पनि गरेन। यूरोप र अमेरिका जस्ता देशले अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पर्ने गरी भाइरस फैलिन पनि कोरियाले दिएन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको डाटा होस या अन्य बिभिन्न सरोकारवाला अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरुको डाटा तथा आकंडामा को;रोना नियन्त्रणमा प्रभाबकारी काम गरिरहेका देशहरु मध्ये कोरिया एक नम्बरमा आउने गरेको छ । जहाँ दैनिक संक्रमण दर र मुत्युदर घटिरहेको छ । थप फैलन नदिन प्रभाबकारी स्वास्थ्य कदमहरु चालिएको छ ।
कोरियामा बसोबास गर्ने सम्पुर्ण नेपाली समुदायको अपेक्षा पनि त्यही होला कोरियाको जस्तो प्रभाबकारी स्वास्थ्य सुरक्षाको ब्यवस्था मेरो देशमा होस । यस्तै कुरालाई मध्यनजर गदै चार दिनमै एक करोड ४० लाख हाराहारीमा नेपाली रुपँया संकलन गरेर नेपाली समु दायले कोरोना भाइरस परिक्षण गर्ने प्रभाबकारि करिब ४ हजार हेल्थ किट नेपाल पठाएर अर्को उदारणीय कार्य गरेको छ । यो कार्य सम्पुर्ण बिश्वमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय प्रति एउटा सिकाइको विषय पनि हुन सक्छ ।
हामी पनि राज्यले कोरोना रोकथामको लागि अगाडी सारेका रणनीतिहरुको इमान्दरी तापुर्वक पालना गरौँ । नागरिक प्रति राज्य जवाफदेहि र राज्य प्रति नागरिक इमान्दार बने पछि समस्याको समाधान अवश्य हुने छ । देश विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । लेखक : जनसम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाकी सभापति तथा सौल नेशनल युनिभर्सिटीको सोधकर्ता हुन ।